वर्षा भाग्यमानी नायिका हुन् ? « Mazzako Online
वर्षा भाग्यमानी नायिका हुन् ?
नायिका वर्षा राउत भाग्यमानी नायिका हुन् । फिल्म यात्राको छोटो समयमा नै उनले पाएको सफलता देख्दा वर्षौंदेखि फिल्ममा सङ्घर्ष गरेकालाई आरिस नहोला भनेर भन्न सकिन्न । किनभने उनका फिल्म राम्ररी चलेको छ । फिल्ममा अहिले उनी हिट छिन् ।
फिल्ममा मात्रै होईन, उनी म्युजिक भिडियो र टिकटकमा पनि हिट छिन् । नायिका वर्षा राउतको चलचित्र जात्रै जात्रा अहिले ५१ दिन मनाउने दौडमा छ । यो चलचित्र बाट उनले तारिफ पनि राम्रै पाईन् । हुन त चलचित्रको अष्ट्रेलिया प्रिमियरको बेला उनले लगाएको पहिरनले कन्ट्रोभर्सी ल्याएको थियो ।
तर उनले त्यसलाई सजिलै टेक ओभर पनि गरिन् । वर्षा कन्ट्रोभर्सीमा कमै पर्ने नायिका हुन् । उनलाई मन पराउने क्रिटिसाईज गर्ने भन्दा मन नपराउने धेरै छन् । त्यसैले उनले थोरै नै गाली पाउँछिन् । अरू नायिकाले म्युजिक भिडियोमा काम गरे गाली पाउँछन्, टिकटकमा केहि भिडियो बनाए भने पनि गाली पाउँछन् तर वर्षालाई यस्तो पिडा छैन ।
उनी म्युजिक भिडियोमा पनि अत्याधिक देखिने नायिका हुन् । टिकटक पनि उनी दिनको २/४ वटा बनाउछिन् नै तर उनलाई गाली गर्ने धेरै कम छन् । वर्षालाई फिल्म बाट पनि सफलता छ, म्युजिक भिडियोमा पनि उनी जमेकी छिन्, टिकटकमा पनि हिट छिन् । ओहो ! वर्षालाई त फलिफाप नै फलिफाप छ ।